ဝိတ်လျော့ဖို့ဆိုတာ - SANTHITSA
ဝိတ်လျော့ဖို့ဆိုတာ … … .. ။ ။
အခုလိုကာလမျိုးမှာ အမျိုးသမီးအများစုဟာ အိမ်ထဲမှာအနေများနေကြတာမို့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်နေမှာမလွဲပါ ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းဖို့ အချိန်အများကြီးပေးပြီးလည်း မလုပ်ဆောင်နိုင်တာမို့ အချိန်ပေးရသက်သာပြီး လိုက်နာရလွယ်ကူမဲ့ နည်းစနစ်လေးများ ကို ညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို သဘာဝနည်း နဲ့လျှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုစိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုနေတာပေါ့ ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အောင်မြင်စွာလျှော့ချနိုင်သူတွေကို သင်လေ့လာကြည့်ပါ ။
သူတို့မှာသူများနဲ့မတူတဲ့ အလေ့အထတွေပိုင်ဆိုင်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ ကဲလေ့လာကြည့်ကြပါစို့…. ။ ။
နေ့စဉ်အချိန်တွေထဲမှာ … … … ။ ။
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အချိန်တွေထဲမှာ နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရှိနေတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးရုံမက ကိုယ်အလေးချိန်ကို တက်မလာစေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ် ။
သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်မှာ လှုပ်ရှားမှုများများ လုပ်နိုင်လေကြံ့ခိုင်မှုပိုမိုလာပြီး အဆီတွေ ကျလာလေဖြစ်မှာပါ ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အောင်မြင်စွာ လျှော့ချနိုင်သူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ တစ်ပတ်မှာ ငါးနာရီလောက်အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းပါပဲ ။
မနက်စာ … … … ။ ။
မနက်ခင်းစာကိုလုံးဝမစားခြင်းကို ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချသူတွေ မလုပ်သင့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် ။
မနက်စာကိုမစားမိခြင်းဟာ အစာစားချင်စိတ်ကိုပိုမို မြင့်တက်လာစေပြီး ဗိုက်စာနေချိန် အစားကိုမရှောင်နိုင်ပဲ မြင်ရာတွေ့ရာကိုစားမိတတ်ပါတယ် ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ဆီးချိုရောဂါဖြစ်မှုကို အားပေးရာရောက်နိုင်ပါတယ် ။
အစားအစာရဲ့အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အမျှင်ဓာတ်များတဲ့မနက်စာကိုစားရင် သင် လမ်းလျှောက်ပြီးချိန်မှာ အဆီလောင်ကျွမ်းနှုန်းကို နှစ်ဆတိုးစေမယ်ဆိုတာပါပဲ ။
အစာပမာဏထိန်းခြင်း … … … ။ ။
အဓိကကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချသူတွေ အစားအသောက်ကိုရှောင်တာ နည်းပါးပေသော်လည်း အစားအစာ စားသောက်မှု ပမာဏကိုစားသောက်တဲ့ အစားအစာတိုင်းမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း ရှိနိုင်တာကလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ ။
ကောင်းသောအစားအစာ … … … ။ ။
ကောင်းသောအစားအစာကို ရွေးချယ်စားသုံးကြရမှာကလည်း အဓိကကျပါတယ် ။ လတ်ဆတ်တဲ့ အပင်ထွက်အစားအစာများကို အဓိကထားပြီး ရွေးချယ်ပါ ။
အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာကိုများများစားပြီး မကောင်းတဲ့အဆီများကို ရှောင်တာကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းနိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ ။ အသင့်စား အစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီး
သစ်သီးဝလံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးဖို့ပါပဲ ။
စိတ်ဖိစီးမှု … … … ။ ။
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှု ရှိနေတတ်တာမလွဲပါ ။ အချို့သူများဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီ ဆိုရင် အစားအစာကိုအရင်ကစားသုံးတာထက် ပိုပြီးစားဖြစ်တတ်ကြပါတယ် ။
စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ အိပ်ရေးပျက်တတ်ပါတယ် ။ အိပ်ရေးမဝတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံနိုင်ရည်နည်းပြီး ဗိုက်ပိုဆာလာတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ကိုယ်သင်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင် လေ့ကျင့်နေထိုင်ပါ ။
အားပေးမှု … … … ။ ။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်သူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အားပေးသူတွေများတာပဲဖြစ်တယ် ။
အိမ်မှာဖြစ်စေအလုပ်မှာဖြစ်စေ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေ အားပေးတတ်သူတွေ များခဲ့ရင် မိမိရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု … … … ။ ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို အောင်မြင်စွာချနိုင်သူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ကိစ္စများစွာမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာကကိုယ်အလေးချိန် ချချင်တဲ့သူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို လုပ်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေဖို့က အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ် ။
credit to စန္ဒီမြင့်မိုရ်
ဝိတျလြော့ဖို့ဆိုတာ … … .. ။ ။
အခုလိုကာလမြိုးမှာ အမြိုးသမီးအမြားစုဟာ အိမျထဲမှာအနမြေားနကွေတာမို့ ကိုယျအလေးခြိနျတကျနမှောမလှဲပါ ။
ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးဖို့ အခြိနျအမြားကွီးပေးပွီးလညျး မလုပျဆောငျနိုငျတာမို့ အခြိနျပေးရသကျသာပွီး လိုကျနာရလှယျကူမဲ့ နညျးစနဈလေးမြား ကို ညှနျပွပေးခငျြပါတယျ ။
သငျ့အနနေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို သဘာဝနညျး နဲ့လြှော့ခနြိုငျဖို့ဆိုစိတျရှညျဖို့တော့လိုနတောပေါ့ ။ ကိုယျအလေးခြိနျကို အောငျမွငျစှာလြှော့ခနြိုငျသူတှကေို သငျလလေ့ာကွညျ့ပါ ။
သူတို့မှာသူမြားနဲ့မတူတဲ့ အလအေ့ထတှပေိုငျဆိုငျတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ ။ ကဲလလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့…. ။ ။
နစေ့ဉျအခြိနျတှထေဲမှာ … … … ။ ။
သငျ့ရဲ့နစေ့ဉျအခြိနျတှထေဲမှာ နစေ့ဉျကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကို ပွုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ ရှိနတေဲ့ကိုယျအလေးခြိနျကို လြှော့ခပြေးရုံမက ကိုယျအလေးခြိနျကို တကျမလာစဖေို့လညျး ကာကှယျပေးပါတယျ ။
သငျ့ရဲ့ အားလပျခြိနျမှာ လှုပျရှားမှုမြားမြား လုပျနိုငျလကွေံ့ခိုငျမှုပိုမိုလာပွီး အဆီတှေ ကလြာလဖွေဈမှာပါ ။ ကိုယျအလေးခြိနျကို အောငျမွငျစှာ လြှော့ခနြိုငျသူတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ တဈပတျမှာ ငါးနာရီလောကျအခြိနျပေးပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးပါပဲ ။
မနကျစာ … … … ။ ။
မနကျခငျးစာကိုလုံးဝမစားခွငျးကို ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခသြူတှေ မလုပျသငျ့တဲ့နညျးဖွဈပါတယျ ။
မနကျစာကိုမစားမိခွငျးဟာ အစာစားခငျြစိတျကိုပိုမို မွငျ့တကျလာစပွေီး ဗိုကျစာနခြေိနျ အစားကိုမရှောငျနိုငျပဲ မွငျရာတှရေ့ာကိုစားမိတတျပါတယျ ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ဆီးခြိုရောဂါဖွဈမှုကို အားပေးရာရောကျနိုငျပါတယျ ။
အစားအစာရဲ့အဓိက လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ အမြှငျဓာတျမြားတဲ့မနကျစာကိုစားရငျ သငျ လမျးလြှောကျပွီးခြိနျမှာ အဆီလောငျကြှမျးနှုနျးကို နှဈဆတိုးစမေယျဆိုတာပါပဲ ။
အစာပမာဏထိနျးခွငျး … … … ။ ။
အဓိကကတော့ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခသြူတှေ အစားအသောကျကိုရှောငျတာ နညျးပါးပသေျောလညျး အစားအစာ စားသောကျမှု ပမာဏကိုစားသောကျတဲ့ အစားအစာတိုငျးမှာထိနျးခြုပျနိုငျခွငျး ရှိနိုငျတာကလြှို့ဝှကျခကျြပါပဲ ။
ကောငျးသောအစားအစာ … … … ။ ။
ကောငျးသောအစားအစာကို ရှေးခယျြစားသုံးကွရမှာကလညျး အဓိကကပြါတယျ ။ လတျဆတျတဲ့ အပငျထှကျအစားအစာမြားကို အဓိကထားပွီး ရှေးခယျြပါ ။
အခှံခြှတျမထားတဲ့ ကောကျနှံစာကိုမြားမြားစားပွီး မကောငျးတဲ့အဆီမြားကို ရှောငျတာကလညျး ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးနိုငျမဲ့အခကျြတဈခုပါပဲ ။ အသငျ့စား အစာတှကေိုရှောငျကဉျြပွီး
သဈသီးဝလံနဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို မြားမြားစားပေးဖို့ပါပဲ ။
စိတျဖိစီးမှု … … … ။ ။
လူတိုငျးလူတိုငျးမှာ စိတျဖိစီးမှု ရှိနတေတျတာမလှဲပါ ။ အခြို့သူမြားဟာ စိတျဖိစီးမှုမြားလာပွီ ဆိုရငျ အစားအစာကိုအရငျကစားသုံးတာထကျ ပိုပွီးစားဖွဈတတျကွပါတယျ ။
စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခါ အိပျရေးပကျြတတျပါတယျ ။ အိပျရေးမဝတဲ့အခါ စိတျဖိစီးမှုကိုခံနိုငျရညျနညျးပွီး ဗိုကျပိုဆာလာတတျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ သငျ့ကိုယျသငျစိတျဖိစီးမှုနညျးအောငျ လကေ့ငျြ့နထေိုငျပါ ။
အားပေးမှု … … … ။ ။
ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခနြိုငျသူတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ ဘာပဲလုပျလုပျ အားပေးသူတှမြေားတာပဲဖွဈတယျ ။
အိမျမှာဖွဈစအေလုပျမှာဖွဈစေ ပါတျဝနျးကငျြမှာဖွဈစေ အားပေးတတျသူတှေ မြားခဲ့ရငျ မိမိရဲ့ကိုယျအလေးခြိနျကို ပိုမိုထိနျးခြုပျနိုငျတယျ လို့ဆိုပါတယျ။
မိမိကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု … … … ။ ။
ကိုယျအလေးခြိနျကို အောငျမွငျစှာခနြိုငျသူတှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ ကိစ်စမြားစှာမှာမိမိကိုယျကိုယျယုံကွညျခကျြအပွညျ့ရှိကွတာပဲဖွဈပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့မို့ပွောခငျြတာကကိုယျအလေးခြိနျ ခခြငျြတဲ့သူတှဟော မိမိကိုယျကို လုပျနိုငျကွောငျး ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိနဖေို့က အဓိကလြှို့ဝှကျခကျြပဲလို့ ဆိုခငျြပါတယျ ။
credit to စန်ဒီမွငျ့မိုရျ
This Year : 69349
Total Hits : 2097903